Tag: maringe | Martech Zone
Kushambadzira Kwako Kunobudira Kunze Kubudirira pasina Kuedza Kunze
Chitatu, June 8, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kana iwe wanga uri muverengi weblog rangu kwenguva yakareba, iwe unoziva kuti iro izwi rinopesana rinowanzo kunditumira kune hasha bofu. Ivo vanhu vari kuSoftAdvice vakatumira pamusoro pechinyorwa chakadzama, Inbound vs Kunze Kushambadzira: Iyo Primer yeNewbies kana Switchers. Mufambiro unoita rakanakisa basa rekufamba kuburikidza nemazano, misiyano, uye kunyangwe maturusi ehurongwa hwekupinda uye nzira dzakabuda. Zvakakosha zvakanyanya kuverenga saka enda unozvitarisa.
Handina chokwadi kana Heat yakagadzira iyi inforgraphic, asi yakanaka kwazvo zvekuti ini ndaifanira kuigovana. Icho chikonzero nei chiri chakanaka ndechekuti iko kutendeseka kutaridzika uye kuenzanisa kwekuti vashambadzi vevashandisi vanoshandisa sei vezvenhau maringe neavhareji, asiri-wekushambadzira munhu. Ini handitende zvakakwana vatungamiriri muiyi indasitiri kupenda yakatendeseka pikicha yemagariro enhau kushandiswa. Mazhinji acho anondiyeuchidza nezve rick inokurumidza sheisters kunze uko. Tinofanira kudaro
Jay Baer ndiye mumwe wevanotungamira ekushambadzira maspika maspika uye vanyori vandinoteerera. Iye achangobva kunyora inonakidza blog post uye infographic iyo inopa kuenzanisa kukuru kwevanokurudzira vachipesana nevatsigiri vemaki. Kufuridzira kusvitsa chinhu chakakosha chevakawanda vezvenhau uye zvirongwa zvemazuva ano zvehukama neruzhinji. Asi ivo vanowanzo ratidza kusaita pakufambisa hunhu kupfuura yekutaura kwevanhu. Ini ndakanyora posvo nezve nei izvi zvakadaro, inonzi Nei Online Influencer